क्यान्सरका यी ७ लक्षण, बेवास्ता नगराैं !! | सुदुरपश्चिम खबर
हामीमध्ये धेरैको बेवास्ता गर्ने बानी हुन सक्छ । शरीरमा गम्भीर खालका समस्याको संकेत हुँदाहुँदै पनि हामी त्यसलाई बेवास्ता गरिरहेका हुन्छौँ । शरीरमा कतै अजीव खालको दुखाई भइरहेको हुन सक्छ।
वा शरीरको कुनै भागमा असामान्य खालको केही परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । यद्यपि, हामी त्यसलाई बेवास्ता गर्छौं । त्यसको धेरै चिन्ता लिँदैनौँ । केही हदसम्म यस्ता लक्षणलाई बेवास्ता गर्ने निर्णय सही पनि हुने गर्दछ । अर्थात्, त्यस्ता कतिपय लक्षणहरू यत्तिकै हराएर जान्छन् ।
तर, कतिपय अवस्थामा यस्ता लक्षणले ठूलो समस्याको संकेत गरिरहेको पनि हुन सक्छ । यस्ता लक्षण क्यान्सरजस्तो गम्भीर खालको रोगको संकेत पनि हुन सक्छ, जसलाई समयमै ख्याल पु¥याउने हो भने उपचार गर्न सकिन्छ । त्यसैले समयमै त्यस्ता लक्षणलाई किन गम्भीरताका साथ नलिने ? वा सुरुवातमै यस्ता केही संकेत पाइसकेपछि पनि किन बेवास्ता गर्ने ? जान्नुहोस्, धेरै मानिसले बेवास्ता गर्ने क्यान्सर रोगका प्रारम्भिक लक्षणहरूः
शरीरमा फोका आउनु
खोकी लाग्नु, स्वर बस्नु वा परिवर्तन हुनु
छालाको रंग परिवर्तन हुनु
हामीमध्ये धेरैले शरीरको छालामा आउने परिवर्तनलाई गम्भीरताका साथ लिँदैनौँ । वा, त्यस्ता परिवर्तनलाई हामी बेवास्ता गर्ने गर्छौं । तर, यस्तो परिवर्तन पनि बेवास्ता गर्न नहुने लक्षण हुन् ।
किनभने शरीरको कुनै पनि अंगको छालाको रंग परिवर्तन हुनु गम्भीर हो । यस्तो समस्या छालाको क्यान्सरका कारण हुन सक्छन् । त्यसैले यस्ता कुनै पनि लक्षण देखिन साथ डाक्टरको सुझाब लिन उपयुक्त छ। (gnewsnepal बाट सभार)